Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Sheekh Mukhtaar Roobow iyo Al-shabaab – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Sheekh Mukhtaar Roobow iyo Al-shabaab
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo gobolka Bakool ayaa sheegayaa in xaalad deganaansho ah saakay laga dareemayo deegaanada saacadihii ugu dambeysay ay ku wada dagaalameen ciidamada Al-shabaab iyo kuwa uu wato Sheekh Mukhtaar Rooboow Cali Abuu Mansuur.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa la sheegayaa in gelinkii dambe ee shalay ay weerar xoogan kusoo qaadeen fariisin ay deegaanka Abal ee gobolka Bakool kaga sugnaayeen ciidamada uu hoggaaminaayo Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, waxaana halkaasi ka bilawday dagaal muddo saacado ah socday.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la hadlay warbaaahinta ayaa sheegay in Sheekh Mukhtaar Rooboow iyo ciidamadiisa ay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhanka dagaalyahanadda Al-shabaab islamarkaana ay haatan ku sugan yihiin deegaanka Abal.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray deegaanka Abal, si ay u xoojiyaan ciidanka uu hoggaaminaayo Sheekh Mukhtaar Rooboow ee dagaalka xoogan kula jira dagaalyahanadda Al-shabaab.
Ciidamada Sheekh Mukhtaar Rooboow Cali Abuu Mansuur ayaa haatan dhaq-dhaqaaqyo ciidan ka wadan deegaanka Abal ee gobolka Bakool, halkaas oo ay ku doonayaan inay isaga difaacaan weerarka kaga soo wajahan dagaalyahanadda Al-shabaab.